बैंकमा कर्मचारीहरुलाई तिहारमा यती धेरैदिन बिदा ! – List Khabar
Home / समाचार / बैंकमा कर्मचारीहरुलाई तिहारमा यती धेरैदिन बिदा !
बैंकमा कर्मचारीहरुलाई तिहारमा यती धेरैदिन बिदा !
admin4weeks ago समाचार Leaveacomment 73 Views
यस वर्षको तिहारमा बैंकमा कर्मचारीलाई कात्तिक १८ गतेदेखि २१ गतेसम्म बिदा दिइएको हो ।नेपाल राष्ट्र बैंकको जनशक्ति व्यवस्थापन विभागले यस अघि उक्त दिन बैंकहरु बिदा हुने सूचना सार्वजनिक गरेको छ ।
काठमाडौँ । पति र पत्नी एक अर्काको परिपुरक मानिने गर्छन् भने धार्मिक रुपमा पनि पत्नीको पतिको जीवन सुधार गर्न ठुलै भूमिका खेल्ने उल्लेख गर्ने गरिन्छ।
पति र पत्नी बीच हुने सामिप्यताले धेरै कुरामा असर गर्ने गर्छ। हरेक मानिसहरुको फरकफरक बानि मात्र मात्र नभई भाग्य पनि फरक हुने गर्छ।
ज्योतिष शास्त्र अनुसार केही यस्ता राशि भएका महिलाहरु हुने गर्छन् जसले आफ्नो पतिको भाग्य चम्काउनको लागि ठुलो भूमिका खेल्ने गर्छन्।
Previous नेपाल मा यस्तो गाउँ छ युवती बिहे गर्न नपाई बित्ने गर्छ जि’न्दगी हाम्रो गा’उनी आउनुहोस भन्दै इ गाउका युवतिहरु